Ungasarudza sei mota yemota yekutengesa yekutenga gwaro | ebike Shuangye
musha Blog nhau Maitiro ekusarudza mota mota bhasikoro yekutengesa kutungamira
Zuva ： 2020-08-26 Zvikamu:nhau Views: 2,135 maonero
Magetsi bhasikoro inova huru yekufambisa yevakawanda uye vanhu vazhinji panguva yeCOVID-19, inokurumidza kupfuura yechinyakare bhasikoro, uye yakachengeteka kupfuura kutakura veruzhinji. Haufanire kutsvaga nzvimbo yekupaka kunyanya, semuenzaniso, kana iwe uchitenga yekupeta mota ine bhasikoro, inogona kupeta zvachose ndokuisa muhofisi yako. Nekuti motorized bhasikoro une mhando dzakawanda, pamwe mumwe munhu pakati penyu anogara akaomarara kuita sarudzo asati atenga bhasikoro remota. Tevere ini ndasarudza mashoma maficha aunogona kutsvaga kuti uwane sarudzo kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti uwane akanakisa e-mabhasikoro.
Nei uchida bhasikoro remota?
Uyu mubvunzo wakakosha kuti chii chauri kuzoita nebhasikoro remagetsi. Vanhu vari kushandisa akanakisa e-mabhasikoro kune akasiyana madhivhosi. Inofananidzwa neyakajairika bhasikoro, mota ine bhasikoro ine yemagetsi mota, bhatiri uye emagetsi kudzora system. Iyo inonyanya kukosha mukana wekushandisa bhasikoro emagetsi ndeyekuti izvi zvine nharaunda-zvine hushamwari, uye hazvikonzere chero kusvibiswa kune zvakatipoteredza. Akanaka e-mabhasikoro inzira dzakakodzera dzekutakura dzekuvhara madiki mapfupi nekukurumidza. Saka vamwe vanhu vari kushandisa bhasikoro magetsi kupedzisa basa ravo nenguva, semuenzaniso, kukurumidza kuenda. Ivo vanochengetedza nguva yavo nekufamba zvirinyore pamabhasikoro avo emagetsi akatenderedza nzvimbo dzakavakidzana. Kana iwe uchizoronga kushandisa muviri wako uye kupisa mamwe macalorie, pedal-assist modhi uye pedal modhi zvese zviri zviviri sarudzo dzakanakisa.
Yakawanda sei bhasikoro remota rinorema? Imwe neimwe modhi emabhasikoro emagetsi ane huremu hwakasiyana. Zvakanaka kunyatso tariswa huremu hwavo neyakagadziriswa yakatemwa nemugadziri. Kazhinji kutaura, huremu hapana musiyano mukuru. Zvichienderana nechimiro chebhasikoro, mota, bhatiri nemhando dzemabhasikoro, yega yega modhi yakanakisa e-mabhasikoro misiyano yezvinhu zvingasiyana, pane zvakawanda zvakasiyana kubva pakurema kusvika kune yakapusa e-bhasikoro. Kazhinji, kupeta mabhasikoro emagetsi kana mugwagwa e mabhasikoro ndee eakareruka e-bhasikoro, uye simba rakakura remafuta tire tire yemagetsi bhasikoro ndeyakanyanya kunetsa e-bhasikoro, asi mota inobvisa iyi inorema kunzwa kana uchichovha bhasikoro. Kurema kuri pakati pe20 kusvika 28kgs kwakakodzera.
Iyi poindi zvakare haigone kufuratirwa. Chokwadi, iwe unofanirwa kuziva nezve izvo. Kune mamwe mamitiro eiyo max sped yemabhasikoro emagetsi mune dzimwe nyika Semuenzaniso, European Union nyika iyo max kumhanya hakugone kupfuura 25km / h. Kana iwe ukanyatsofunga nekumhanyisa sesarudzo, saka pamwe kukwidza bhajeti kunobatsira. Iyo yekumhanyisa kumhanyisa kumusoro, mutengo webhasiketi yemagetsi wakakwira Kazhinji, avhareji kumhanya senge 25-35km / h, iri yakachengeteka uye inokodzera kufamba. Kune mumwe munhu, chinhu chikuru chinosarudza bhasikoro remagetsi kuri kurerutsa kutasva kwavo munzvimbo dzakakwira kwete kumhanya.
Vamwe vanhu vanofungidzira kuti e-mabhasikoro anodhura haana musiyano mukuru kubva pakati-epamusoro-pekupedzisira bhasikoro magetsi pahunhu. Zvakangodaro, iko kusarura. Sezvineiwo, mhando yeebike ine kumwe kuwirirana nemutengo. Panyaya yemagetsi kudzora system tekinoroji, zvishandiso, zvikamu uye nezvimwe, ivo vane mimwe misiyano pahunhu hwematai, mabhureki ediski, bhatiri, sevhisi sevhisi, ect.
Kana iwe uchifarira bhasikoro remota uye uchida kuziva zvakawanda, unogona kutarisa zvinyorwa zvakapfuura kana kushanyira edu Official Website, zvakare sarudza kusiya meseji pazasi.
Tags:mabhasikoro emagetsi mota yemagetsi bhasikoro
Prev: Zvakanakira kutenga mota yemagetsi moped
Next: 128th Canton Fair ichaitirwa online muna Gumiguru